Wasaaradda Caafimaadka XFS oo Muqdisho ka furtay shir looga hadlayo dhammeystirka Qorshaha Qaran ee sugnaanta caafimaadka+Sawirro – Al-Hurriyah
Kulankan Wadatashiga ah oo socon doona muddo 5 cisho ah waxaa soo qaban qaabisay wasaradda caafimaadka Soomaaliya, waxaana looga hadlayaa dhammeystirka qorshaha Qaran ee sugnaanta caafimaadka.
Shirka oo ay ka soo qeyb galeyn mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ,xubno ka socday maamul goboleedyada, dhaqaatiir, aqoonyahano iyo marti sharaf kale ayaa lagu gorfeeyay qaabka ugu wanaagsan ee loo dhammeystiri karo qorshaha Qaran ee sugnaanta caafimaadka dalka oo muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed.
ku simaha Agaasimaha guud ee Wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka Bulshada Soomaaliya Maxamuud Buulle Maxamed oo shirka furay ayaa Sheegay in ay muhiim tahay in ka qeyb galayaashu ay si wadajira uga shaqeeyaan sidii barnaamijkan uu u guuleysan lahaa maadaama caafimaadku uu ka mid yahay waxyaabaha aasaasiga u ah Aadanaha.
Ka qeyb galayaasha kulanka ayaa mudadada uu socdo waxaa ay is weydaarsan doonaa fikrado iyo tusaalooyin ku saabsan dhammeystirka qorshaha Qaran ee sugnaanta caafimaadka, iyadoo gabagabada kulankana la filayo inay kasoo baxaan qodobo muhiim ah oo horseedi kara in la helo qorshe caafimaad oo dhammeystiran.
Muqdisho, Talaado, Nofeembar 19, 2019—Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan…
وزير الأمن الداخلي يفتتح مؤتمرا حول تنسيق أنشطة مصلحة الهجرة…
Xukuumadda Soomaaliya Oo Shir Uga Qeyb Galeysa jabuuti
Wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Dalka Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa waxaa ay gaareen dalka jabuuti,halkaas oo la filayo inay Shir uga qyeb galaan. Wafdiga waxa qeyb ka ah Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya Xildhibaan…
Wasiirka arimaha dibada xukuumada federaalka soomaaliya axmed ciise cawad oo khudbad ka jeediyay shirka wadatashiga puntiland ee maantay lagu daah furay garowe ayaa ka hadlay arimo badan oo ay kamid yihiin khilaafka u dhexeeya dowlada iyo puntiland . Wasiir…
Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay Kadib Socdaalkii Shaqo Ee Washington+Sawirro Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, kadib…
Muqdisho, Jannaayo 14, 2020: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka soo laabtay dalka Cumaan oo uu kaga qeyb galay tacsida Suldaan Qaabuus Binu Siciid. Madaxweynaha oo Suldaanka cusub ee Cumaan Haysam Bin Daariq…
Itoobiya oo Safiiradeedii kala baxday dalal dhowr ah + sababta rasmiga ah.
Ilo wareedyo diblumaasiyadeed ayaa xaqiijinaya in dowladda Itoobiya ay uyeeratay qaar badan oo kamid ah safiiradeeda ufadhiyay wadamada caalamka sabab aan illaa iyo hadda la shaacin. Telefeshinka Al Jazeera ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay labaxday…